सन्दिपले चलाए जादू ? पपुवा न्यूगिनी यसरी भयो एकैछिनमा धरासायी, नेपाली क्रिकेटको बिश्वभर प्रशंसा – PathivaraOnline
Home > खेलकुद > सन्दिपले चलाए जादू ? पपुवा न्यूगिनी यसरी भयो एकैछिनमा धरासायी, नेपाली क्रिकेटको बिश्वभर प्रशंसा
Poonam September 11, 2021 खेलकुद 0
नेपाली क्रिकेटमा कहिलेकाँही जादू हुने गर्छ । यस्तै जादू शुक्रबार नेपाल र पपुवा न्यू गिनीबिचको दोश्रो एकदिवशीय खेलमा देखिएको छ । लेगस्पिनर सन्दीप लाछिमानेले क्यारियरकै उत्कृष्ट बलिङगर्दै लगातार ६ विकेट लिएपछि नेपालले पपुवा न्युगिनीमाथि कीर्तिमानी जित हात पारेको छ । नेपालले पिएनाजीलाई दोस्रो ओडिआई खेलमा १ सय ५१ रनको फराकिलो अन्तरले पराजित गरेको हो । पहिलो खेलमा २ विकेटको जित हासिल गरेको नेपालले सिरिज २ ० ले जितेको छ ।
नेपाली क्रिकेटको ओडिआईमा यो नै सर्वाधिक ठूलो जित हो । जितको लागि २ सय ३४ रनको विजयी लक्ष्य पछ्याएको पिएनजी १९।१ ओभरमा ८२ रनमा अल आउट भयो । यसअघि नेपालको ओडिआईमा सर्वाधिक ठूलो जित यूएईविरुद्ध २०१९ मा १ सय ४५ रनको रहेको थियो ।
ओपनर लेगा सियाकालाई तीव्र गतिका बलर सोमपाल कामीले दोस्रो ओभरको तेस्रो बलमा ४ रनमा बोल्ड आउट गर्दै उत्कृष्ट सुरुवात दिलाएका थिए । अर्का तीव्र गातिका बलर विक्रम सोबले कप्तान असाद भा लालाई चौथो ओभरको पाँचौं बलमा विकेटकिपर विनोद भण्डारीबाट एक रनमा क्याच गराउँदै पिएनजीलाई ११–२ को अवस्थामा पुर्याए ।
त्यसअघि अल अमरेत क्रिकेट मैदान ओमानमा टस जितेर पहिला ब्याटिङ रोजेको नेपालले ४९।३ ओभरमा २ सय ३३ रनमा अल आउट भएको थियो । नेपालका लागि युवा ब्याट्सम्यान रोहित कुमार पौडेलले १ सय २३ बलमा २ चौका र ३ छक्का सहित सर्वाधिक ८६ रनको योगदान दिए । करण केसीले तल्लोक्रममा २६ बलमा २ चौका र ४ छक्का सहित ४२ रनको इनिङ खेल्दै आउट भएका थिए । सातौं विकेटका लागि रोहित र करणले ६६ रनको उत्कृष्ट साझेदारी गरेका थिए ।
महिलाको यो भागमा गरिने चु’ म्ब नले महिलालाई १०० गुणा बढी उ,त्ते,जि,त बनाउँछ
टोकियो ओलम्पिक: ४० पदकसहित चीन शीर्ष स्थानमा, नेपालकाे यस्तो छ अवस्था!
अर्का चर्चित फुटबल खेलाडीको यसरि भयो दुःखद् निधन